चुनाव पार्टीले जित्ने कि ओलीले ?::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण
चुनाव पार्टीले जित्ने कि ओलीले ?
भोटचाहिँ के भनेर माग्ने ? आफ्नै पार्टीले सहयोग नगरेकाले चुनावमा जानुपर्यो भन्नुभा छ । अब भोट पार्टीलाई माग्ने कि आफूलाई ?
चुनाव हुने प्रत्यक्ष कार्यकारीको होइन । दलीय संसदीय चुनाब हो । हरेक ठाउँमा आफै उठेर जित्न पनि मिलेन । पार्टीले जितेन भने पनि सक्कियो । पार्टीले जित्यो भने फेरि जित्ने त अहिले भएकैले होला । पार्टी त अहिले नै षड्यन्त्रकारी छ ।
राजश्वले त तलब पनि धान्दैन । चुनाव गर्ने ऋण लिएर नै हो । चुनावकै लागि भनेर कस्ले ऋण देला ? कर्णालीको पुल या भ्याक्सिनको नाममा लिएको ऋणले जिन्दाबाद-मुर्दाबाद गरेर भोलि जितियो नै भने पनि ब्याज तिर्ने कसरी ?
फेरि पार्टीले जित्यो रे, त्यो जनमत कसको भन्ने कसरी छुट्याउने ? यस्तो सनकका लागि जनताले कतिन्जेल गास काटिरहने ? कहिलेसम्म धरौटी राख्न नसकेर अस्पतालको ढोकामैं मृत्युवरण गरिरहने ?